Marka ay timaado in xilli Christmas ah, oo dhan qurxinta ah dariiqyada iyo music ee hawada ku jira si caddaalad ah oo iidaya. Haddii aad doonayso in aad ku qaataan galabtii raaxo guriga, songs Christmas sidoo kale waa in ay la socdaan. Waxaad la xiriiri kartaa raadiyaha iyo dooran saldhigga music ee la soo dhaafay ka. Laakiin hadda, waxa uu noqonayaa mid sahlan. Kaliya Waxaad dhegaysan kartaa heeso Christmas jecel aad online. Dhab ahaantii, waxaa jira adeegyo badan oo radio internet Internetka, kaas oo curates songs weyn ka hoos ku sifayn gaarka ah ee Christmas ama Holidays. Waxyaabaha soo socda ayaa waxay noqon doonaan qaar ka mid ah adeegyada internet radio aad kala dooran karto. Haddii aad hesho qaar ka mid ah heesaha cajiib ah inta lagu guda jiro dhagaysto, xitaa si ay u soo bixi music ee qodobkan aad u hesho. Ma sugi karo in aad iska baarto? Aan aragno waxa aan heysano aad u.
Qeybta 1: Great idaacadaha Christmas online
Qeybta 2: Sida loo download gabayadii Christmas ka saldhigyada
Halkan waxaa ku qoran liis ah Idaacadaha weyn Christmas talinayaa:
Waxaa ka mid ah kuwa, waxaan jeclaan Jango ugu tan iyo heesaha oo si fiican u curated oo lacag la'aan ah. Ma ku raacsan tahay ila jirin? Waad ka bixi kartaa doorashada ee hoos ku meel comment ah.
Iyadoo hoorto songs Christmas online, qaar idinka mid ah waxaa laga yaabaa fikrad fiican haddii aad kala soo bixi kartaa heeso ee loo maqli offline. Haa, waad qaban kartaa iyadoo la kaashanayo ku Wondershare Streaming taariikhqorihii Audio . Waxaa ka dhan ah Idaacadaha online khasaara eber oo tayo leh ka soo dejisan kartaa music. Bal aynu eegno sida loo isticmaalo hoos ku qoran.
Tallaabo 1: Ku rakib Wondershare Streaming Audio Recorder ah
Download barnaamijka si loo soo dajiyo on your computer. Markaasaa waxaa u abuurtaan dib markii la rakibey. Waxaad ka heli doontaa button Record ah ee bidixda xagga kore. Riix badhanka si ay u helaan diyaar.
Talaabada 2: Download songs Christmas ka Idaacadaha kor ku xusan
Dooro mid ka mid ah idaacadaha ka mid ah liiska kor ku xusan iyo bilowdo muusikada ciyaaro. Ilaa iyo inta waxaa sanqadhaya ka your computer, barnaamijka bilaabi doonaan in ay soo bixi music iyada oo lagu qoro.
Tallaabo 3: U beddel Lugood
Ka dib markii songs waxaa lagala soo bixi, si ay u tagaan Library si aad uga hesho. Dooro heeso iyo guji Add badhanka Lugood si hoose. Markaas heesaha oo loo wareejin doonaa Lugood oo la soo bandhigay hoos playlist ee SAR.
Hadda waxaad ku raaxaysan karaan gabayadii Christmas waqti kasta iyo meel kasta. Just bilaabaan in ay ku raaxaystaan ​​music ah.
> Resource > Download > Great Christmas Radio Stations Talooyin iyo Sida loo Download Music ah